Comienzos - 西班牙语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: comienzos (西班牙语 - 缅甸语)
သင်တို့အပေါ်မှာ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကို ငါ များပြားစေသဖြင့်၊ သူတို့သည်ပွားများ၍ သားမြေးအစဉ် အဆက်ရှိကြလိမ့်မည်။ နေရင်းအရပ်တို့၌ ငါနေရာချ၍၊ အရင်ပြုသကဲ့သို့ ငါကျေးဇူးပြုမည်။ ငါသည် ထာဝရ ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။
Bashar Zeedan relaciona el nuevo ataque sobre la libertad de Internet con la Primavera Jordana y comenta: @BasharZeedan: el gobierno ha estado reprimiendo y censurando desde el comienzo de la #Primavera_Árabe...
မင်းတို့တော့ မီးနဲ့ ကစားနေတာပဲ၊ ဘာရှာ ဇီဒန်က အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုအသစ်ကို ဂျော်ဒန်နွေဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြခဲ့သည်။
Umida está entre las pocas mujeres involucradas en producción de documentales y fotografía en la Uzbekistan actual, una república interior de 30 millones de habitantes que logró su independencia de la Unión Soviética en 1991.Obtuvo su grado en Rusia en el Instituto de Cinematografía en 1986, marcando el comienzo de una larga pero crecientemente problemática carrera artística.
Al comienzo del rodaje, hace casi 10 años, las personas no tenían miedo de expresarse y la filmación tuvo lugar tranquilamente.
Al comienzo escuchamos la historia de la madre de una chica real que fue sometidaaverificación y después fue expulsada por los familiares del novio.
အန်ဒီဂျန်ဒေသကိုသွားပြီး ကလေးတွေ ရေဘယ်လိုချိုးကြသလဲဆိုတာကို လေ့လာစောင့်ကြည့်တုန်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချိန်တစ်ချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conformeanuestras obras, sino conformeasu propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo
ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကျင့်သောအကျင့်ကို ထောက်တော်မမူ။ ရှေးကပ်ကာလမရောက်မှီ၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့အဘို့ ကိုယ်တော်တိုင်ကြံစည်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်နှင့်အညီ ငါတို့ကိုကယ်တင်၍၊ သန့်ရှင်းသောအရာ၌ ခေါ်သွင်းတော်မူ၏။
ငါ၌အပ်ထားသော တရားဟောခြင်း၊ အခွင့်အားဖြင့် တော်လျော်သောအချိန်၌၊ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ထင်ရှားစေတော်မူသောအရာနှင့် စပ်ဆိုင်သောထာဝရအသက်ကို မြော်လင့်သည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော သမ္မာတရား ကိုဝန်ခံခြင်းအလိုငှါ၎င်း၊
ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သားတို့ကို ရှေ့ဦးစွာစစ်ကြောစီရင်ရသော အချိန်ရှိပြီ။ ငါတို့ကို ရှေ့ဦးစွာ စစ်ကြောအချိန်ရှိပြီ။ ငါတို့ကို ရှေ့ဦးစွာ စစ်ကြောစီရင်လျှင်၊ ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂလိတရားစကားကို နားမ ထောင်သောသူတို့၏ အမှုသည် အဘယ်သို့ပြီးလိမ့်မည်နည်း။
Mi manera de vivir, desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos
ယေရုရှလင်မြို့တွင် ကိုယ်အမျိုးသားချင်းတို့၏ အထဲ၌ အကျွန်ုပ်နေသဖြင့်၊ ငယ်သောအသက်အရွယ်မှ စ၍၊ အကျွန်ုပ်၏အနေ အတိုင်းအပြုအမူများကို ယုဒလူ အပေါင်းတို့သည်သိကြပါ၏။
También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuantoadar y recibir, sino vosotros solos
အချင်းဖိလိပ္ပိမြို့သားတို့၊ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောစပြု၍၊ မာကေဒေါနိပြည်မှ ငါထွက်ဆဲရှိသောအခါ အလှူလှူခြင်း၊ အလှူခံခြင်းအမှု၌၊ သင်တို့မှတပါး အဘယ်အသင်းတော်မျှငါနှင့်မဆက်ဆံကြ။
y si comienzaagolpearasus consiervos, y si come y bebe con los borrachos
ကျွန်ချင်းတို့ကို ရိုက်ပုတ်လျက် သေသောက်ကြူးသောသူတို့နှင့်တကွ စားသောက်လျက်နေ၏။
ငါတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရာ သက္ကရာဇ် နှစ်ဆယ်ငါးခု၊ ပဌမလဆယ်ရက်နေ့၊ မြို့တော်ကို လုပ်ကြံ ၍၊ တဆယ်လေးနှစ်စေ့သောနေ့ တွင်၊ ထာဝရဘုရား၏ လက်တော်သည် ငါ့အပေါ်မှာရှိ၍ ထိုမြို့သို့ဆောင် သွားတော်မူ၏။
တောင်ခန်းတံခါးတို့သည်လည်း မြောက်ခန်း တံခါးတို့နှင့် တူသည် ဖြစ်၍၊ တန်တိုင်းတဘက်တချက်၊ အရှေ့သို့မျက်နှာပြုသော စင်္ကြံဦး၌ ဝင်ရာတတံခါးဝရှိ၏။
Al llegar la noche, dijo el señor de la viñaasu mayordomo: "Llamaalos obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros.
သို့မဟုတ်မူကား၊ အကြင်ကျွန်က၊ ငါ့အရှင်လာခဲလိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲ၌ အောက်မေ့သည်နှင့် ကျွန်ချင်း ယောက်ျားမိန်းမတို့ကို ရိုက်ပုတ်လျက်၊ စားသောက်ယစ်မူးလျက် နေ၏။
သင်တို့နှစ်ယောက်ကို ခေါ်ဘိတ်သောသူက၊ ဤသူအား နေရာကိုပေးလော့ဟုလာ၍ ပြောလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင်သည် ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့် နိမ့်သောနေရာသို့ ဆင်းရလိမ့်မည်။
me ha parecido bien tambiénamí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo
ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်သည် ဗေဒင်တွက်ခြင်းငှါ လမ်းနှစ်လမ်းဆုံမိရာလမ်းခွ၌ ရပ်၏။ မြှားတို့ကို ရောနှော ၏။ တေရပ်ရုပ်တုတို့ကို မေးမြန်း၏။ အသည်းကို ကြည့်ရှု ၏။
ထာဝရဘုရားကို ကြောက်ရွံ့သော သဘော သည် ပညာ၏မူလအမြစ် ဖြစ်၏။ သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားကိုသိကျွမ်းသော သဘောသည် ဥာဏ်ဖြစ်၏။
Levántate y da voces en la noche, en el comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Levanta hacia él tus manos por la vida de tus pequeñitos, que han desfallecido por el hambre en las entradas de todas las calles
ညဦးယံအချိန်၌ ထ၍အော်ဟစ်လော့။ ထာဝရ ဘုရား၏မျက်နှာတော်ရှေ့မှာ သင်၏နှလုံးကို ရေကဲ့သို့ သွန်းလောင်းလော့။ ငတ်မွတ်၍ ခပ်သိမ်းသော လမ်းဝမှာ အားပျက်လျက်နေသော သင်၏သူငယ်တို့ကို အသက် ချမ်းသာစေခြင်းငှါ၊ အထံတော်သို့ သင်၏လက်ကို ချီဆန့်လော့။
oseća (塞尔维亚语>德语)freundes (德语>韩语)שעות: (希伯来语>英语)gulung tikar (马来语>简体中文)communicated (德语>荷兰语)do not turn off target (英语>印地语)pharmacotoxic (英语>芬兰语)wateule (斯瓦希里语>法语)eliminerò (意大利语>世界语)i will cherish it forever (英语>西班牙语)dont msg me (英语>印地语)rongte khade ho jana (印地语>英语)tolong beri tunjuk ajar kepada saya (马来语>英语)burballes (加泰罗尼亚语>西班牙语)lisätutkimusohjelmasta (芬兰语>英语)disposent (法语>斯瓦希里语)ni nini kilichotokea itaonekana (斯瓦希里语>西班牙语)rajwap com mp3 (印地语>英语)tiếc nuối (越南语>英语)vou dormir mais um pouco lol (葡萄牙语>英语)fratres ad finem (拉丁语>英语)saan ginagamit ang pako (英语>他加禄语)“what the hell you (英语>印地语)hermana (西班牙语>克丘亚语)ice cream, (英语>毛利语)